Sidee oo bilaash ah ilaa Kaydinta
Qaybta 1. Waa maxay "Documents iyo Data" on iPhone?
Qaybta 2. Sida loo hubiyo kaydinta "Documents iyo Data" on iPhone
Qaybta 3. Sidee oo bilaash ah ilaa kaydinta "Documents iyo Data" on iPhone
Qaybta 4. 1 click si loo kordhiyo aad iPhone ee kaydinta
Si aad u fahamtaan "Documents iyo Data", waa inaad marka hore ay fahmaan sida an shaqo codsiga macruufka. Codsi kastaa macruufka hawl-galo deegaan qodayaan ah - taas macnaheedu waa mid kasta oo ka codsiyadaas leedahay kaydinta shakhsi u gaar ah, sidaa darteed looma baahna in ay dib u soo ceshano xogta ka qayb kale.
"Documents iyo Data" folder wuxuu ka kooban yahay alaabo kala duwan ee codsiga kala duwan. Tusaale ahaan; aad app Amazon shidin ayaa eBooks soo bixi, waayo, offline helaan in ay "Documents iyo Data" folder. Safari ayaa dhanka kale waxa uu leeyahay gal ka buuxsamay goobaha browser iyo maylka adag.
Sababtoo ah soocitaankan, aad iPhone si tartiib ah u noqon doonaa saxmada la files ku meel gaar ah oo qashinka ah oo ugu dhaqsaha badan u dagaalami doonaa meel la xogta aad dhab ahaan doonayaan in qalab aad. Samayn Ma aha oo kaliya ay boos u qaataan, laakiin waxay keeni iPhone ay u shaqeeyaan hab xasilan ay sabab u tahay "heft".
Sidaas, sida badan lagu kaydiyo meel sameeya qof walba "Documents iyo Data" folder qaadan? Waxay ku xidhan tahay, run ahaantii. Si aad u ogaato tirada sixir, raac tallaabooyinkan:
Tallaabada 1. Dul Dejinta> General> Isticmaalka.
Tallaabada 2 . Si aad u ogaato wax badan oo meel codsi kasta ee "Documents iyo Data" qaado, riix magaca codsiga. Waa in aad arki karin qaybinta xusuustiisa app ku noqon.
Tan iyo mid kasta oo xogta dukaamada codsiga in ay folder gaarka loo leeyahay, waxaa jira hab sahlan ma in laga takhaluso oo ka mid ah macluumaadka aan la rabin. Waxaa jira laba siyaabood oo kala cadeeyo waxyaabaha ku jira "Documents iyo Data" folder oo ka mid ah codsiyada macruufka:
Habka 1 . Delete ama uninstall codsiga ka iPhone. Dib codsiga.
Habka 2 . masixi "Document iyo Data" files app ee gudaha ka tusaale jeebka furan ee "Settings" oo guji "Clear soo bixi Files" in ay tirtirto files soo bixi codsiga.
Fiiro gaar ah: Ma aha in dhamaan codsiyada mobile habkan awood u gudaha app.
Waxaad tahay, haddana mar kale, ka carooday in aadan ku rakibi kartaa macruufka version ugu dambeeyey, waayo, ma aad leedahay meel ku filan. Waxaad ka bariyeelay oo taageeray wax kasta oo xarun lagu kaydiyo daruur. Si kastaba ha ahaatee, weli waa ma meel lagu keydiyo oo ku filan.
Sida loo isticmaalo Wondershare SafeEraser oo bilaash ah ilaa aad iPhone
The feature 1-click on software tani waa mid laga cabsado! Waa ay awoodaan in ay sii daayaan qadar weyn oo ah meel lagu kaydiyo in kaliya hal go. Waa kuwan sida:
Tallaabada 1 . On interface ugu weyn, dooro "1-Guji Nadiifinta" - taas waxay keenaysaa doonaa barnaamijka si ay u bilaabaan baaritaan ah oo ku saabsan iPhone.
Tallaabada 2 . Waxa lagu tusay doonaan wadarta guud ee files ku meel gaar ah oo qashinka ah mar scan ku dhamaato. Bilaash ilaa meesha bannaan ee kaydinta aad iPhone adigoo gujinaya ah "nadiifinta" button.
Si aad si buuxda u masixi dhammaan faylasha loo baahnayn, hubi in aad si ammaan ah iPhone waxaa ku xiran in ay naga computer oo dhan muddada nidaamka.
Talaabada 3 . Kadib markii geedi socodka tirtiro ayaa dhameystirtay, interface ee software-ka Leexin doonaa warbixin ku saabsan gobolka kaydinta hadda aad iPhone.
Free Up Kaydinta on iPhone Video Tutorial
> Resource > Clean-up > Sidee oo bilaash ah ilaa Kaydinta "Documents iyo Data" on iPhone